Fakàna ny avo-quality lahatsary tsy mbola mora kokoa, fa ny fisintonana lahatsary dia ampahany ihany amin’ny fitantarana ny dingana. Ary izany no tsy dia manana ny fampitàna tantara amin’ny taokanto natao ho mety ho fizarana traikefa, manolotra ny vaovao, na nandrakotra ny vaovao. Mba hahazoana ny lahatsary avy amin’ny zava-endrika manta mba ho vita, watchable ampahany, izany dia mila fanovana. Maro ny olona mihevitra lahatsary fanovana dia sarotra sy mafy ny hianatra.
Mazava ho azy fa izany ianao dia hianatra ny fototry ny lahatsary fanovana. Ianao dia hianatra ny fomba fanafarana sy mandamina ny sary sy ny fananany, ny fomba karakarao tsara horonantsary sy manampy azy ireo ny fizotry, sy ny fomba mamy teny.
Ianao dia hianatra momba ny loko fanitsiana sy ny grading, video effects sy ny fiovana, ary kokoa
Ary ianao dia ho fianarana izany rehetra izany ianao raha miasa ao amin’ny lahatsary izay no omena izany mazava ho azy.
Fomba izany dia afaka manaraka sy hahazo ny tena,-tanana eo amin’ny traikefa
Amin’ny farany ity dia mazava ho azy fa ianao dia manana ny fahaiza-manao mba hanomboka ny fanovana ny tetikasa mba afaka mahazo nanomboka nilaza ny tantara manokana. Dia efa nanorina tanteraka ny mpitari-dalana mba hanampiana anao hianatra ny fomba hanova ny lahatsary, raha fotsiny ianao hatao nanomboka tamin’ny fototra, na te-master fanovana lahatsary sy lahatsoratra-ny famokarana
← Mampiaraka izay mihoatra ny
Chatroulette milalao →